FAHAFATESANA MPIANATRA 6 TENY MAHITSY – NIDOBOKA AM-PONJA ILAY MPAMILY NAHAVANIN-DOZA - Ministère de l'Education Nationale
Nampidirina am-ponja vonjimaika ny talata teo, ny mpamilin’ilay fiara Mercedes Sprinter nivarina an-kady teny Ampanotokana Mahitsy ny zoma 29 aprily farany teo, ka nahafatesana mpianatra 6, ao amin’ny 10ème C sy 10ème B, ao amin’ny sekoly tsy miankina “La pépite d’or”, eny Ambohimanarina.
Nanapa-kevitra ny mpitsara mpapanoha lalàna fa eny Tsiafahy no fonjaina ity mpamily ity, nefa nohon’ny tsy fisian’ny fitaovam-pitaterana teo amin’ny zandary, taorinan’ny fanolorana azy teny amin’ny fampanohavana, dia eny amin’ny fonjaben’Antanimora aloha no hitazomana azy. Amin’ny 26 jolay ho avy izao kosa ny fotoam-pitsarana.
Nanomboka tamin’ny 10 ora sy sasany maraina ny fakana am-bavany, ary tsy vita raha tsy tamin’ny 3ora sy sasany hariva. Tonga teny an-toerana ireo ray amandrenin’ireo ankizy namoy ny ainy. Nandefa mpisolo vava ny sekoly.
Vono olona tsy niniana natao no hanenjehana ity mpamily ity. Mbola 35 taona ny lehilahy. Fantatra tamin’ny famotorana natao teo anivon’ny zandary fa nolaviny ny fanondrona azy ho nitondra fiarakodia tao anatin’ny fahamamoana. Nolazainy kosa fa nisongona sarety tamina fidinana ary tao anaty fiholahana no nahatonga ny loza. Tsy voafehy ny familiana ka nivarina tany anaty hantsana ilay fiara. Mpamily tompon-toerana ity lehilahy naiditra am-ponja ity raha ny fanazavan’ny zandary . Namoy ny ainy kosa ny mpamily mpisolo toerana, izay mitondra ny fiara rehefa sabotsy sy alahady.
Nisy diabe fanoherana ny loza ateraky ny fiara fitateram-bahoaka, sy fametrahana labozia sy fahatsiarovana hoa an’ireo ankizy namoy ny ainy taorinan’ity loza nahatsiravina ity raha tsahivina.